फागुन १, २०७४ मगलवार १३:४९:०० प्रकाशित
डा शर्माले नेपालमा पछिल्लो समय जीवनशैली र खानपानका कारण हृदयाघात, एन्जाइना, हार्ट फेल जस्ता समस्या बढिरहेको बताए । ‘बिरामीको चाप तीव्र रुपमा बढेको छ,’ उनले भने, ‘त्यस अनुसार उपचार केन्द्र र निदानात्मक सेवाको विस्तार हुन सकेको छैन ।’
आममानिसमा मुटुरोग भन्नासाथ हृदयघात र हार्ट फेल मात्र हो भन्ने भ्रम छ । तर, मुटका अन्य थुप्रै रोग हुन्छन् । मुटु र रक्तनली सम्बन्धित भएकाले मुटुका सयभन्दा बढी रोग हुने गरेको डा प्रकाशराज रेग्मी बताउँछन् । तीमध्ये डाक्टरहरुले मुटुका रोगलाई जन्मजात मुटुरोग, बाथ मुटुरोग र जीवनशैली सम्बन्धी मुटुरोग भनेर ३ भागमा बा“डिएको उनको भनाइ छ ।
जीवनशैलीसँग सम्बन्धित मुटुरोगः जीवनशैलीसँग सम्बन्धित मुटुरोगमा हृदयाघात, उच्च रक्तचाप आदि पर्छन् । मुटुरोगमध्ये हृदयाघातलाई मानव मृत्युको प्रमुख कारण मानिँदै आएका छ । डाक्टरहरुका अनुसार मुटु मांसपेशीको डल्लो हो, यसले पम्पको काम गर्छ र शरीरभर रक्तसञ्चालन गराउँछ । मुटुलाई काम गर्ने ऊर्जा मुटुका मांसपेशीको बाहिरी भागमा रहेका ३ वटा कोरोनरी रक्तनलीहरुमा प्रवाहित रगतमार्फत ग्लुकोज र अक्सिजनबाट प्राप्त हुन्छ । त्यसकारण मुटुलाई आवश्यक पर्ने ऊर्जा प्राप्त हुन मुटुका कोरोनरी रक्तनलीहरु स्वस्थ हुनु जरुरी छ ।
हार्ट फेल पनि मुुटुको डरलाग्दो रोग हो । डा रेग्मीका अनुसार अधिकांश मानिस दम बढ्ने बित्तिकै फोक्सोमा खराबी आयो भन्ने सोच्छन् । तर, यो आंशिक रुपमा मात्र सत्य हो । दमको सम्बन्ध फोक्सोसँग मात्र नभई मुटुसँग पनि हुन्छ । उनी भन्छन्, ‘यदि शारीरिक श्रम गर्दा दम बढ्छ र आराम गरेपछि कम भएर जान्छ भने यो मुटुरोग हुन सक्छ । मुटु सुन्निएको, मुटुका मांसपेशीहरु कमजोर भएको, मुटुको भल्भ बिग्रिएको अवस्थामा यस्तो प्रकृतिको दम उत्पन्न हुन्छ । यसलाई हार्ट फेल भएको भनिन्छ ।’ उनका अनुसार हार्ट अट्याक र हार्ट फेल फरक–फरक अवस्था हुन् । हार्ट अट्याक भएपछि मुटु कमजोर भई हार्ट फेल हुन्छ । मुटु कमजोर हुँदा मानिस सास नपुगेर निसासिन्छ । यसका साथै मुटु सुन्निने रोग तथा मुटुको घड्कनमा गडबडी आउने पनि जीवनशैलीमा आएको परीवर्तनका कारण मुटुमा देखिने समस्या हुन्।
bishnu pokhrel लेख्नुहुन्छ भदौ १२, २०७५ मगलवार १६:२८:२२
Dear Editor/ respected Pravin Dhakal! its very nice information ! i am so interesting your swasthya khabar online paper and share it on may Facebook ! your all articles and collections are very useful, simple to read and understanding ! may i meet/interaction with your representative/team member at Nepalgunj ? my info: Near to Nepalgunj medical college, Hospital, 9858024433 FB: bishnu pokheral
१. स्वास्थ्यमा लगानी बढाउन आवश्यक – सामाजिक विकास मन्त्री बराल
२. टिचिङको निर्देशकका लागि ३ जनाको नाम सिफारिस, निजीमा काम नगर्ने सर्त
३. चेपाङमा रहेका ब्याक्टेरिया अफ्रिका र अमेजनका जङ्गलमा निर्भर समुदायसँग मिल्दाजुल्दा
४. स्वास्थ्य तथा जनसंख्या संसदीय उपसमिति गठन
५. आयुर्वेद विभाग अन्तर्गतका २ सय ५ कर्मचारीको सरुवा (नामसहित)
६. स्वास्थ्य क्षेत्रको उत्कृष्ट करदाताको रुपमा नोबेल अस्पताल सम्मानित
७. वीर अस्पतालको छुट्टै अत्याधुनिक शल्यक्रिया भवन बन्दै
८. समस्यामा स्वास्थ्य– १ : महामारी नियन्त्रणको बजेट स्थानीय तहमा, समस्या ठोकिन्छ केन्द्रमा
९. चिकित्सा शिक्षा विधेयकमाथि ९ गतेबाट दफावार छलफल हुने
१०. पत्रकार सिद्धिकीलाई उपचार खर्चको अभाव
२. दह्रो मुटु भएका डाक्टर वैद्य
३. नर्भिक अस्पताललाई अमेरिकाको प्रतिष्ठित 'द बिज अवार्ड'
४. एक अर्ब रुपैयाँ लागतमा जनकपुर अञ्चल अस्पताल परिसरमा प्रसूति गृह बन्ने
५. हाच्छिउँ किन रोक्नु हुँँदैन? यस्ता छन् हाच्छिउँ सम्बन्धी ७ रोचक तथ्य